We Fight We Win. -- " More than Media ": 28-Sep-2009
မှတ်တမ်းတင်သူ-Ko Aung Min Htun(New York)
ကျနော်တို့ မှာ ဗွီဒီယိုမပါသွားတဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို မဖေါ်ပြနိင်တာခွင့်လွတ်ပါ။ ဗွီအိုအေက တည်းဖြတ်ပြီးသလောက်ပဲ
တင်ပြနိင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြရဲဘော်တွေ က သိန်းစိန် နဲ့ညဏ်ဝင်းကိုစောစောစီးစီး အမျှဝေသံ၊ ဖိနိပ်တွေ နဲ့ ဝိုင်းပေါက် ကြတဲ့ပုံတွေ တစိတ်တဒေသ်နဲ့ကျေနပ်ပါဦး နော်။ ဆက်လာဦးမှာပါ။ ဒီထက်ကောင်းတာတွေနဲ့ ပေါက်ဖို့ လည်းအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။
at 23:017comments
ဖိနပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် - Aldo မှ စိတ်ချရတယ်။
လျောက်လို့ ကောင်း- ပေါက်လို့ မလွဲ ။
Brand - Aldo -
Size - 44 ( US-11)
Cost- $ 99.00
Owner - မိုးသီးဇွန်
at 22:45 10 comments
Monks’ path of resistance
Saffron Revolution-Burma Monks
These criminals do not represent the country.
These criminals do not represent the people of Burma.
They are not the legitimate government elected by the people.
Tuesday, 29 September 2009 00:07
New Delhi (Mizzima) - Burmese activists in New York on Monday threw shoes at visiting Foreign Minister Nyan Win, an act of opposition against his representation of the Southeast Asian nation at the 64th United Nations General Assembly.
Moe Thee Zun,aformer student leader and activist, said he, along with nearly 20 friends, laid in wait of the Burmese Foreign Minister near his guest house and flung shoes and other objects toward the car conveying Nyan Win to United Nations headquarters.
“I took off my shoes and flung them at Nyan Win, the sight of him makes me angry,” said Moe Thee Zun, who asastudent leader in 1988 took to the streets in Rangoon, leading mass protests demanding democracy.
“These men should not be representing our people, whom they are brutally killing and suppressing,” he added, satisfied that he and several of his friends flung shoes and other materials at the Burmese FM.
One protester “threw his coffee and there were stains on the car, though it did not get on Nyan Win,” he added.
Both Nyan Win and Prime Minister Thein Sein, who are attending the General Assembly, are lodged in East Gates Hotel on 39th Street in New York, and are the first Burmese generals to attend the annual congregation in14 years.
On Monday, Thein Sein deliveredaspeech at the General Assembly, prior to which he met with Senator James Webb,astrong advocate of engagement with the military regime, to discuss US-Burma relations.
“We did not realize that Thein Sein was inaseparate car. We thought he was along with Nyan Win in the same car, but later we saw him in another car,” said Moe Thee Zun.
He said, the Burmese generals should not be representing the people of Burma, as they are not the legitimate government elected by the people.
Moe Thee Zun said he and his friends are gearing up for another round of surprise attacks on the Burmese delegation when they return to their hotel in the evening.
လူသတ်တရားခံ သိန်းစိန်-ညဏ်ဝင်း အဖွဲ့ ကို ဆန်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ ပွဲကြီး - ဒုတိယပိုင်း
လူသတ်တရားခံ သိန်းစိန်-ညဏ်ဝင်း အဖွဲ့ ကို ဆန်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ ပွဲကြီး
ဒုတိယ ပိုင်းကိုဆက်လက် ရှု့ စားရပါမယ်။ ဗွီဒီယိုကို တည်းဖြတ်နေတဲ့အတွက် ပြီးတာနဲ တင်ပေးမယ်။
'' Small doses not matter ''
'' The Most Aggressive Campaign and The Most Pro-Active Campaign in 2009.
You will hear the most powerful voice of Freedom by sons and Daughters of 88.
Burma - Burma - must be Free
Freedom and Justice for Mother Land.
Don't goaway - Stay with US.
at 18:297comments
လူသတ်သမား ဥာဏ်ဝင်း ဖိနပ်စာမိ
စော စော စီးစီးဥာဏ်ဝင်း ဖိနပ်စာ မိသွားရှာတယ်။ သိန်းစိန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ စကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောနိင်ဘူး။ ထစ်နေတယ်။ တုန်နေတယ်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေတဲ့သူတွေကလည်း စိတ်မထိမ်းနိင်တော့ ၀င်ဆဲတော့
ပုံကောင်းတွေလွှတ်သွားတယ်။ ဗွီအိုအေမှာတော့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ရသွားတယ်။
ကျနော်တို့ ဓါတ်ပုံတွေရရင် တင်ပေးပါမယ်။ အားရပါးရကြည့်ရပါစေမယ်။ဖိနပ် နဲ့ ပေါက်တဲ့ ကိုမိုးသီးနဲ့ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ မိတ်ဆွေ နစ်ဦး ကော်ဖီခွက်နဲ့ လှမ်းပက်တဲ့ Mr Creator တို့ ကို မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ညနေ မှာ ပွဲရှိသေးတယ်။ မနက်ပွဲလွတ်သွားလို့စိတ်ပျက်နေသူများ၊လက်စွမ်းပြလိုသူများဆက်ဆက်လာခဲ့ပါ။ အခွင့်ကောင်းကိုမလွှတ်ပါစေနဲ့ -
သင် ရင်းရမှာ က Sub Way Ticket အတွက် ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
at 13:06 23 comments
ကိုဇော်ဝင်းနဲ့ရဲ အင်စပက်တာ အချီအချ ဆွေးနွေးခန်း
ကိုဇော်ဝင်းနဲ့အင်စပက်တာ အချီအချ ဆွေးနွေးခန်း
အင်စပက်တာ- မင်းတို့ မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ပါမစ်ပါလား
ဇော်ဝင်း- မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ဘော့စ်ကို ငါညကတည်းက အကြောင်းထားတာပဲ။
အက်စပက်တာ- မင်းတို့ ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒေါသထွက်နေရတာလဲ ။
ဇော်ဝင်း- ဒီကောင်တွေက လူသတ်သမားတွေကွ၊ ငါတို့ ထဲမှာ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့အမျိုးတွေပါတယ်ကွ။ မင်းတို့အခုအကာကွယ်ပေးနေတဲ့ သိန်းစိန်နဲ့ ညဏ်ဝင်းဆိုတဲ့ သူတွေက ရာဇ၀တ်သားတွေကွ၊့ သံဃာတွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုသတ်ထားတယ်။
မင်းသိလား၊ ဒီကောင်တွေ မူးယစ်ဆေးဝါး ဒီလာတွေကွ။ သူတို့ ဟီရိုးအင်းတွေသယ်လာတယ်လို့ ဒို့ သတင်းရထားတယ်။ မင်းကြည့်စမ်း သိန်းစိန် ကားလမ်းကိုပြောင်းပြန်မောင်းသွားတယ်။ ဒီကောင်ဥပဒေကို အမြဲ ချိုးဖေါက်နေတဲ့ကောင်ကွ။ မင်း Ticket ပေးလို့ ရတယ်။
အင်စပက်တာ- ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်တာဘယ်သူတွေလည်း မင်းသိလား။
ဇော်ဝင်း- ငါမသိဘူးကွ ။
အင်စပက်တာ- မင်းတို့ ထဲက ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲ
ဇော်ဝင်း- ငါတို့ အားလုံးက စပါတပ်ကပ်တွေကွ
အင်စပက်တာ- သူတို့က ဘယ်အဖွဲ့ ကလည်း
ဇော်ဝင်း - အဖွဲ့ တွေက အများကြီးကွ။ တယောက်နဲ့ တယောက်လည်း တည့် ကြတာမဟုတ်ဘူးကွ။ ငါလည်း အကုန်လုံးမသိဘူးကွာ။
အင်စပက်တာ- မင်းတို့ အော်နေတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား သိန်းစိန် ဆိုတာ ဘာအဓိပါယ်လဲ ကွ ။
ဇော်ဝင်း - သူနာမည်ရင်းလေ။
အင်စပက်တာ- ဖိနပ်နဲ့ပေါက် တာ တွေမင်းမြင်ရဲ့ သားနဲ့ငါကိုမညာနဲ့ ။
ဇော်ဝင်း - မမြင်ဘူးကွ၊ ငါမျက်စိက အဝေးမှုန်တယ်။
အင်စပက်တာ - ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်ကိုမင်းသိရမယ်။
ဇော်ဝင်း-မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကွာ သူမှာ မိန်းမ နဲ့ ကလေးတွေရှိကောင်းရှိမှာပဲ။ ထားလိုက်ပါကွာ။
at 09:594comments
နားဂစ် လူသတ်တရားခံ သိန်းစိန် နဲ့ညဏ်ဝင်း ဖိနပ်နဲ့ အပေါက်ခံရ ပြီ
လူနည်းပေမဲ့ သွေးမကျဲ တဲ့ နယူးယောက် တိုက်ပွဲ
ညဏ်ဝင်း လန့် ပြီး ကားထဲကိုငုံရှောင်တယ်။ သူလူများက လက်နဲ့ ဝိုင်းကာ ကြတယ်။ ကားကို အတင်းမောင်းပြေးတယ်။သံဃာနစ်ပါးနှင့် မမေစန္ဒာစိုးညွန့် တို့ က လူသတ်သမားများ၊ သူခိုးများ လို့ အော်ဟစ် ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ သူတို့ ကြောက်အားလှန့် အားဖြစ်ပြီး ကားမောင်းပြေးပါတယ်။ သိန်းစိန် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ သိန်းစိန်ကားက ကားလမ်းကို ပြောင်းပြန်မောင်းပြီးပြေးပါတယ်။ ဆန္ဒပြသမားက ရဲများကို Ticket ပေး၊ Ticket ပေးလို့ ဝိုင်းအော်ပေးလိုက်ကြတယ်။ သိန်းစိန် ကားခေါင်းခန်းက ပါသွားတာကိုတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ပြောင်နေတဲ့နဖူးကို ပတ်ဖို့ ထားတဲ့နောက်စေ့က ဆံပင်ကျို့ တို့ ကျဲတဲမှာ အခွေ လိုက်ပြုတ်ကြသွားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ဗွီအိုအေမှာ သတင်းထောက်နစ်ဦးက လာရောက်မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုရိုက်ပါတယ်။ Mizzima သတင်းဌာနမှာ တယ်လီဖုန်းဖြင့်သတင်းရယူပါတယ်။ အာအက်ဖ်အေမှသတင်းထောက်များကိုမတွေ့ ပါ ။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုကြပါ။
at 09:06 13 comments
စာရွက်ပေါ်မှသည် လက်တွေ့ တိုက်ပွဲဆီသို့
“မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် စစ်မောင်းသံကြားပါက ခွာရှပ်နေသောစစ်မြင်းများ၊များစွာရှိသည်။ တိုက်ပွဲခေါ်သံကိုငံ့လင့်နေသော
တိုကျိုမြို့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂ နှစ်ပြည့်အောင်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနား
ဂျပန် နိုင်ငံ၊ တိုကျို မြို့ Shibuya ရှိ UN HOUSE ရှေ့တွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂ နှစ်ပြည့်အောင်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနား ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ရှိ JAC နှင့် ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများစုပေါင်းပြီး အခမ်းအနားကို ၂၇-၉-၀၉ နေ့၊ ညနေ ၃ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ယင်းအောင်မေ့ဖွယ် အခန်းအနားသို့ မြန်မာ နိုင်ငံသား စုစုပေါင်း ၄၀၀ ခန့် တတ်ရောက်ကာ သံဃာ တော်များက ရေစက်ချအမျှဝေကြပြီးဂျပန်ရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှတာဝန်ရှိ သူများကနေပြီး ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှင့်လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ ကို ပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြသည်။